အပိုငျး ၂၃ - BookCubicle
မွပွေငျသို့ပွုတျကသြံ အကယျြကွီးထှကျလာ၏။ ကဒီလြှံ့မကျြနှာဟာ နာကငျြမှုကွောငျ့ဖွူစှတျနကော သှေးအခြို့ကိုအနျထုတျလိုကျရလတေယျ။ ဒဏျရာတှကေနေ မြားစှာသောနာကငျြမှုတှကေို သူစတငျပွီးခံစားနရေလပွေီ။
ကဒီယနျနှငျ့ ကဒီကှငျတို့ ကဒီလြှံ့ဘေးအပွေးရောကျသှားကွသညျ။ ကဒီလြှံအားထိနျးပှထေ့ားပေးရငျး ကဒီလြှံ့ပါးစပျက သှေးစီးကွောငျးကိုသာ စိုးရိမျစှာကွညျ့နလေတေယျ။
သူ့မကျြနှာအမူအရာကတော့ အလှနျစိတျရှုပျထှေးနဟေနျပါပဲ။ ပထမအကွိမျတုနျးက ရှုံးခဲ့သညျက သတိလကျလှတျဖွဈသှားခဲ့သညျပဲလေ… ဒါပမေယျ့ အခုတဈခေါကျမှာ ကဒီလြှံကအားကုနျသုံးနိုငျနပေါလကျြနှငျ့…. သူတျောစငျအဆငျ့ကိုးရဲ့ စှမျးအားအကုနျသုံးနိုငျပါနလေကျြနှငျ့ ဘာကွောငျ့ ရှုံးရပွနျသညျလဲ
“အကိုကွီး.. ဘယျလိုနလေဲ။ အရမျးနားနလေား”
မောငျနှမနှဈယောကျရဲ့အကူအညီဖွငျ့ ကဒီလြှံထရပျလိုကျသညျ။ သူ့ခေါငျးကိုဖွညျးညှငျးစှာ ခါရငျးပွောသညျ။
“အကိုကွီးနဲ့ ညီမသုံး… ငါဘာမှမဖွဈပါဘူး။ အပျေါယံဒဏျရာလောကျပဲ ရတာပါ”
စိတျမပူဖို့ရာပွောနတေဲ့ ကဒီလြှံ့အသံကိုက စိတျပူရအောငျကိုအားနညျးနသေညျ။
ကဒီလြှံရဲ့ဖွူဖြော့နတေဲ့မကျြနှာကိုကွညျ့ပွီး ကဒီယနျဒေါသတှဆေူပှကျလာသညျ။ ခနျ့ညားစှာရပျနတေဲ့ဂငျြခနျြကို မုနျးတီးစှာသူလှညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။
“ညီမသုံး မငျးအကိုနှဈကို ဂရုစိုကျထား။ငါ ဒီမောကျမာတဲ့အကောငျကို သငျခနျးစာပေးလိုကျမယျ။”
မောငျနှမနှဈယောကျအားထားရဈကာ ကဒီယနျစငျမွငျ့ပျေါသို့ လြှငျမွနျစှာတကျလိုကျသညျ။
ကဒီလြှံနှငျ့ကဒီကှငျတို့ ကဒီယနျကို ပွေးတားပမေယျ့ သူတို့နောကျကသြှားခဲ့သဖွငျ့ သကျပွငျးသာခမြိတော့သညျ။ ကဒီယနျ နိုငျနိုငျရှုံးရှုံး ကဒီကလနျက အကယျဒမီမှာသိက်ခာအတျောကသြှားလိမျ့မညျ။ ဒီပွိုငျပှဲဟာ တရားမြှမြှတတယှဉျပွိုငျခဲ့ကတြာ။ သူတို့ရှုံးခဲ့တယျဆိုရငျတောငျမှ မကျြနှာမပကျြသငျ့ပဘေူး။ ဒါပမေယျ့အခုတော့ ကဒီယနျက တိုကျခိုကျဖို့လုပျနပွေီ။ အခွအေနကေပွောငျးသှားပွိ။ အကယျ၍ လူသဈလေးကို အတနျးကွီးစီနီယာက အနိုငျကငျြ့တယျဆိုတဲ့ သတငျးသာ ပြံ့သှားခဲ့မယျဆိုရငျ… သူတို့မောငျနှမသုံးယောကျတော့ အကယျဒမီတဈခုလုံးရဲ့ လှောငျပွောငျတာကိုခံရတော့မညျ။
ဒေါသဖွဈစှာဖွငျ့ ဂငျြခနျြအား စစေ့ကွေ့ညျ့ရငျးကနေ ကဒီယနျပွနျပွောလိုကျသညျ။
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ မငျးတကယျသနျမာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျးကငါ့ညီကိုဒဏျရာရအောငျ လုပျလိုကျတယျ။ ငါမငျးကိုတဈခုခုပွနျမလုပျရသေးဘဲ မငျးထှကျမသှားရဘူး”
စငျအောကျမှာရှိနသေမြှ ပရိတျသတျတှဟော နှဖူးကြောတှရှေုံ့သှားတဲ့အထိ မကျြမှောငျကြုံ့လိုကျကွတယျ။ ကဒီယနျ့အပျေါ သူတို့ရဲ့အမွငျက ပွောငျးသှားရပွီ။
“ကဒီယနျ ဒါဘာအဓိပ်ပါယျလဲ။ မငျးက ခငျြးယနျကလနျကို မကျြလုံးထဲမထညျ့တော့ဘူးလား”
လေးနကျသညျ့အသံဖွငျ့ လူတဈယောကျဟာ စငျပျေါတကျလာသညျ။ ဂငျြခနျြစိတျသကျသာရာရသှားရသညျမှာ ထိုသူကား သူ့အကိုခငျြးယနျဟူ ဖွဈနသေောကွောငျ့ပေ။
ခငျြးယနျဟူ ကဒီယနျအား စစေ့ကွေ့ညျ့ကာပွောသညျ။
“မငျးငါ့ညီကို ဒုက်ခပေးခငျြရငျ ငါ့ကိုအရငျနိုငျအောငျလုပျ”
သူ့ရှမှေ့ာရပျနတေဲ့ ခငျြးယနျဟူရဲ့စကားကိုကွားတော့ ဂငျြခနျြရငျထဲနှေးသှားရသညျ။
“အကိုကွီး ပွနျဆငျးသှားလိုကျပါ။ ကြှနျတျော ရငျဆိုငျနိုငျပါတယျ”
“မရဘူး မငျးမနိုငျနိုငျဘူး။ ကဒီယနျက သူတျောစငျအထှတျအထိပျအဆငျ့ကိုရောကျနပွေီ။ မငျးရဲ့သူတျောစငျအဆငျ့ကနိမျ့သေးတယျ။ အကိုကွီးက မငျးကိုကူညီမယျ”
ခဏမြှတုံ့ဆိုငျးပွီးနောကျ ဂငျြခနျြစကားအခြို့ပွောကာ ခေါငျးညိတျလိုကျသညျ။
“ဒါဆို အကိုကွီး ဂရုစိုကျပါ”
`ဤသို့ဆိုပွီးနောကျ ဂငျြခနျြစငျပျေါက ဆငျးသှားသညျ။
ဂငျြခနျြစငျပျေါကဆငျးသှားသညျကို ကဒီယနျလှောငျပွောငျသညျ့အကွညျ့ဖွငျ့ ကွညျ့လိုကျသညျ။
“ခငျြးယနျဟူ မငျးအရငျပွောတာနျော။ ဒုက်ခရောကျမှ ငါ့ကိုအပွဈမတငျနဲ့”
“ဟမျ့ ဒါတှပွေောဖို့စောပါသေးတယျ။ ဘယျသူနိုငျမယျ ဘယျသူရှုံးမယျဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့”
သူနဲ့ကဒီယနျတို့နှဈယောကျလု့း သူတျောစငျအထှတျအထိပျအဆငျ့ကို ရောကျနတောကွာလှပွီဖွဈသညျ။ ကဒီယနျ သူ့သူတျောစငျစှမျးအားကို လကျနကျအဖွဈမသှနျးလုပျနိုငျသေးသ၍ သူတို့ရဲ့အဆငျ့ကအတူတူပဲဖွဈသညျ။
ခငျြးယနျဟူကို ကဒီယနျကတော့ အထငျသေးစှာသာ ကွညျ့နေ၏။ ညာဘကျလကျကိုမွှောကျလိုကျစဉျမှာ မြားပွားလှတဲ့ ရှရေောငျစှမျးအားတှေ သူ့လကျထံလာစုကာ ရှရေောငျဓားတဈလကျအဖွဈပွောငျးသှားသညျ။ ထိုရှရေောငျဓားဟာ အတျောပငျကွီးသလို ငါးပနေီးပါးရှညျသညျ။ အပွားကပငျ အတျောကွီးလှ၏။ လကျကိုငျကိုထိနျးကာဖွငျ့ ထိုဓားအား ကဒီယနျလကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျထားရသညျ။
ဂငျြခနျြစိုးရိမျစှာ မကျြမှောငျ ကြုံ့လိုကျမိသညျ။ ခငျြးယနျစံအိမျမှာ သူတျောစငျလကျနကျတှမွေငျခဲ့ဖူးသညျ။ ဒါကွောငျ့ ဤသညျက ကဒီယနျ၏သူတျောစငျလကျနကျဖွဈကွောငျး ပွောနိုငျသညျ။ သူ့အနနေဲ့ ဒီကမ်ဘာကိုရောကျပွီးကတညျးကနေ အခုမှသူတျောစငျလကျနကျ အသုံးပွုသညျကို မွငျဖူးတာဖွဈတယျ။ သူစိတျမလှုပျရှုားဘဲ ဘယျနမေလဲ။
ရှရေောငျဓားကွီးပျေါလာသညျကို ကွညျ့ပွီး ပရိတျသတျတှထေဲဆူညံသှားလတေယျ။
“ဒါဆို သူသူတျောစငျဖွဈ သှားပွီပေါ့
“ကဒီယနျသာ သူတျောစငျအဆငျ့ဆို ခငျြးယနျဟူတော့ သပွေီပဲ”
သူတျောစငျအထှတျအထိပျအဆငျ့နှငျ့ သူတျောစငျကသိပျမကှာပမေယျ့ ဖွတျကြျောဖို့ရာတော့ခကျသညျ။ ခါဂဲအကယျဒမီမှာ သူတျောစငျအဆငျ့စီနီယာတှအေမြားကွီးရှိသညျ။ သို့ပမေယျ့ လူတိုငျးလကျနကျမသှနျးလုပျနိုငျပေ။ ထိုသို့သှနျးလုပျနိုငျဖို့ရာလညျး အတျော့ကိုခကျခဲပငျပနျးစှာဖွတျကြျောခဲ့ရသညျခညျြးသာဖွဈသညျ။ ထနျယှမျတိုကျကွီးအတှငျးမှာတောငျ လကျနကျသှနျးလုပျသညျ့အဆငျ့မရောကျပဲ သသှေားရသူတှအေမြားကွီးပငျ။
တဈစုံတဈယောကျဟာ သူတျောစငျအဆငျ့ေ၇ာကျသှားပွီဆိုလြှငျ ထိုသူ၏ခှနျအားမှာအတျောလေး မြားပွားသှားပလေိမျ့မညျ။ သူတျောစငျလကျနကျဆိုသညျမှာ လကျနကျကွီးသကျသကျမဟုတျပေ။ သုံးစှဲသူ၏စှမျးရညျတှကေို တဈဖကျသား၏ခှနျအားတှထေကျသာလှနျအောငျ ထောကျပံ့ပေးသေးသညျ။
ကဒီယနျရဲ့လကျနကျကိုကွညျ့ရငျး ခငျြးယနျဟူ၏ မကျြနှာမှာ သကျတောငျ့သကျသာမရှိတော့ပေ။ ကဒီယနျကသူတျောစငျအဆငျ့ေ၇ာကျသှားပွီဆိုရငျ ကောငျးကငျကိုတောငျ လှုံ့ဆျောနိုငျနပွေီဖွဈသညျ။ သူတျောစငျအထှတျအထိပျအဆငျ့ကလူတဈယောကျက သူ့ပွိုငျဘကျမဟုတျတော့ပေ။
“အကိုကွီးက သူတျောစငျလကျနကျ သှနျးလုပျနိုငျသှားပွီလား…”
စငျအောကျက ကဒီမောငျနှမနှဈယောကျလညျး အံ့အားသငျ့နလေတေယျ။ ကဒီကှငျအံ့အားသငျ့စှာဖွငျ့ ကဒီယနျ သူ့လကျနကျကိုဝယေ့မျးနသေညျအား တအံ့တသွကွညျ့နမေိသညျ။
သူတျောစငျလကျနကျအားကွညျ့ရငျး ကဒီလြှံမကျြနှာမှာ အားကသြညျ့အရိပျအယောငျတှရှေိနသေညျ။ သူ့အကိုက သူမရောကျနိုငျသေးတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျသှားခဲ့ပွီပဲ။
ခငျြးယနျဟူ၏မကျြနှာကတော့ တဖွညျးဖွညျးမဲမှောငျလို့နလေပွေီ။ ဖိအားတှကေ ခငျြးယနျဟူကိုအတျောဒုက်ခပေးနပွေီ။
“ဟား…ဟား..ဟားးးး…. ခငျြးယနျဟူ .. မငျးအခုကွောကျနပွေီလား။ မွပွေငျမှာ ဒူးသုံးကွိမျထောကျပွီး ခခယယတောငျးပနျမယျဆိုရငျ ငါခှငျ့လှတျပေးမယျ။ အဲ့လိုမှမဟုတျရငျတော့ ဟှနျ့ ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့”
ခငျြးယနျဟူရဲ့မကျြနှာဟာ ပိုပွီးအ၇ုပျဆိုးသှားတယျ။ သူခကျြခငျြးဒေါသသဖွငျ့ပွနျပွောသညျ။
“အိပျမကျသာမကျနလေိုကျ။ ကဒီယနျ မငျးဘာသာသူတျောစငျပဲဖွဈနဖွေဈနေ ငါခငျြးယနျဟူက သတေောငျကွောကျမှာမဟုတျဘူး”
ကဒီယနျ ခငျြးယနျဟူအား အမွငျကတျစှာကွညျ့သညျ။
“ခငျြးယနျဟူ မငျးငါ့နဲ့တိုကျခိုကျဖို့ ဘာလကျနကျကိုသုံးမှာလဲ”
ခငျြးယနျဟူ ကဒီယနျအားအံကွိတျကာကွညျ့လိုကျသညျ။ သူ့မကျြလုံးထဲမှ မီးဝငျးဝငျးတောကျလကျြရှိသညျ။
ထိုအခခြိနျတှငျ လူအုပျထဲမှ ဓားတဈခြောငျးအား ခငျြးယနျဟူဆီပဈပေးလိုကျသညျ။
ခငျြးယနျဟူ ထိုဓားအားဆှဲဖမျးလိုကျသညျ။ ဒီဓားဟာမပေါ့သလို အရမျးလညျးမရှညျလှဘူး။ ငှဓေားဟာ အလငျးရောငျအောကျမှာ အရပျလေးမကျြနှာလုံးကို တဖကျြဖကျြလကျနစေတေယျ။ အရောငျကိုဖယျလိုကျရငျတောငျ ကဒီယနျ့ဓားနှငျ့ ခငျြးယနျဟူဓားဟာ အနညျးငယျကှာခွားနသေေးတယျ။
မြေပြင်သို့ပြုတ်ကျသံ အကျယ်ကြီးထွက်လာ၏။ ကဒီလျှံ့မျက်နှာဟာ နာကျင်မှုကြောင့်ဖြူစွတ်နေကာ သွေးအချို့ကိုအန်ထုတ်လိုက်ရလေတယ်။ ဒဏ်ရာတွေကနေ များစွာသောနာကျင်မှုတွေကို သူစတင်ပြီးခံစားနေရလေပြီ။
ကဒီယန်နှင့် ကဒီကွင်တို့ ကဒီလျှံ့ဘေးအပြေးရောက်သွားကြသည်။ ကဒီလျှံအားထိန်းပွေ့ထားပေးရင်း ကဒီလျှံ့ပါးစပ်က သွေးစီးကြောင်းကိုသာ စိုးရိမ်စွာကြည့်နေလေတယ်။
သူ့မျက်နှာအမူအရာကတော့ အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ပါပဲ။ ပထမအကြိမ်တုန်းက ရှုံးခဲ့သည်က သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ပဲလေ… ဒါပေမယ့် အခုတစ်ခေါက်မှာ ကဒီလျှံကအားကုန်သုံးနိုင်နေပါလျက်နှင့်…. သူတော်စင်အဆင့်ကိုးရဲ့ စွမ်းအားအကုန်သုံးနိုင်ပါနေလျက်နှင့် ဘာကြောင့် ရှုံးရပြန်သည်လဲ
“အကိုကြီး.. ဘယ်လိုနေလဲ။ အရမ်းနားနေလား”
မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီဖြင့် ကဒီလျှံထရပ်လိုက်သည်။ သူ့ခေါင်းကိုဖြည်းညှင်းစွာ ခါရင်းပြောသည်။
“အကိုကြီးနဲ့ ညီမသုံး… ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အပေါ်ယံဒဏ်ရာလောက်ပဲ ရတာပါ”
စိတ်မပူဖို့ရာပြောနေတဲ့ ကဒီလျှံ့အသံကိုက စိတ်ပူရအောင်ကိုအားနည်းနေသည်။
ကဒီလျှံရဲ့ဖြူဖျော့နေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ကဒီယန်ဒေါသတွေဆူပွက်လာသည်။ ခန့်ညားစွာရပ်နေတဲ့ဂျင်ချန်ကို မုန်းတီးစွာသူလှည့်ကြည့်လိုက်သည်။
“ညီမသုံး မင်းအကိုနှစ်ကို ဂရုစိုက်ထား။ငါ ဒီမောက်မာတဲ့အကောင်ကို သင်ခန်းစာပေးလိုက်မယ်။”
မောင်နှမနှစ်ယောက်အားထားရစ်ကာ ကဒီယန်စင်မြင့်ပေါ်သို့ လျှင်မြန်စွာတက်လိုက်သည်။
ကဒီလျှံနှင့်ကဒီကွင်တို့ ကဒီယန်ကို ပြေးတားပေမယ့် သူတို့နောက်ကျသွားခဲ့သဖြင့် သက်ပြင်းသာချမိတော့သည်။ ကဒီယန် နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး ကဒီကလန်က အကယ်ဒမီမှာသိက္ခာအတော်ကျသွားလိမ့်မည်။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာ တရားမျှမျှတတယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကျတာ။ သူတို့ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှ မျက်နှာမပျက်သင့်ပေဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ ကဒီယန်က တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေပြီ။ အခြေအနေကပြောင်းသွားပြိ။ အကယ်၍ လူသစ်လေးကို အတန်းကြီးစီနီယာက အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းသာ ပျံ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်… သူတို့မောင်နှမသုံးယောက်တော့ အကယ်ဒမီတစ်ခုလုံးရဲ့ လှောင်ပြောင်တာကိုခံရတော့မည်။
ဒေါသဖြစ်စွာဖြင့် ဂျင်ချန်အား စေ့စေ့ကြည့်ရင်းကနေ ကဒီယန်ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“ချင်းယန် ရှင်းတန် မင်းတကယ်သန်မာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းကငါ့ညီကိုဒဏ်ရာရအောင် လုပ်လိုက်တယ်။ ငါမင်းကိုတစ်ခုခုပြန်မလုပ်ရသေးဘဲ မင်းထွက်မသွားရဘူး”
စင်အောက်မှာရှိနေသမျှ ပရိတ်သတ်တွေဟာ နှဖူးကျောတွေရှုံ့သွားတဲ့အထိ မျက်မှောင်ကျုံ့လိုက်ကြတယ်။ ကဒီယန့်အပေါ် သူတို့ရဲ့အမြင်က ပြောင်းသွားရပြီ။
“ကဒီယန် ဒါဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ မင်းက ချင်းယန်ကလန်ကို မျက်လုံးထဲမထည့်တော့ဘူးလား”
လေးနက်သည့်အသံဖြင့် လူတစ်ယောက်ဟာ စင်ပေါ်တက်လာသည်။ ဂျင်ချန်စိတ်သက်သာရာရသွားရသည်မှာ ထိုသူကား သူ့အကိုချင်းယန်ဟူ ဖြစ်နေသောကြောင့်ပေ။
ချင်းယန်ဟူ ကဒီယန်အား စေ့စေ့ကြည့်ကာပြောသည်။
“မင်းငါ့ညီကို ဒုက္ခပေးချင်ရင် ငါ့ကိုအရင်နိုင်အောင်လုပ်”
သူ့ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ ချင်းယန်ဟူရဲ့စကားကိုကြားတော့ ဂျင်ချန်ရင်ထဲနွေးသွားရသည်။
“အကိုကြီး ပြန်ဆင်းသွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်”
“မရဘူး မင်းမနိုင်နိုင်ဘူး။ ကဒီယန်က သူတော်စင်အထွတ်အထိပ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။ မင်းရဲ့သူတော်စင်အဆင့်ကနိမ့်သေးတယ်။ အကိုကြီးက မင်းကိုကူညီမယ်”
ခဏမျှတုံ့ဆိုင်းပြီးနောက် ဂျင်ချန်စကားအချို့ပြောကာ ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။
“ဒါဆို အကိုကြီး ဂရုစိုက်ပါ”
`ဤသို့ဆိုပြီးနောက် ဂျင်ချန်စင်ပေါ်က ဆင်းသွားသည်။
ဂျင်ချန်စင်ပေါ်ကဆင်းသွားသည်ကို ကဒီယန်လှောင်ပြောင်သည့်အကြည့်ဖြင့် ကြည့်လိုက်သည်။
“ချင်းယန်ဟူ မင်းအရင်ပြောတာနော်။ ဒုက္ခရောက်မှ ငါ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့”
“ဟမ့် ဒါတွေပြောဖို့စောပါသေးတယ်။ ဘယ်သူနိုင်မယ် ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့”
သူနဲ့ကဒီယန်တို့နှစ်ယောက်လု့း သူတော်စင်အထွတ်အထိပ်အဆင့်ကို ရောက်နေတာကြာလှပြီဖြစ်သည်။ ကဒီယန် သူ့သူတော်စင်စွမ်းအားကို လက်နက်အဖြစ်မသွန်းလုပ်နိုင်သေးသ၍ သူတို့ရဲ့အဆင့်ကအတူတူပဲဖြစ်သည်။
ချင်းယန်ဟူကို ကဒီယန်ကတော့ အထင်သေးစွာသာ ကြည့်နေ၏။ ညာဘက်လက်ကိုမြှောက်လိုက်စဉ်မှာ များပြားလှတဲ့ ရွှေရောင်စွမ်းအားတွေ သူ့လက်ထံလာစုကာ ရွှေရောင်ဓားတစ်လက်အဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ ထိုရွှေရောင်ဓားဟာ အတော်ပင်ကြီးသလို ငါးပေနီးပါးရှည်သည်။ အပြားကပင် အတော်ကြီးလှ၏။ လက်ကိုင်ကိုထိန်းကာဖြင့် ထိုဓားအား ကဒီယန်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ထားရသည်။
ဂျင်ချန်စိုးရိမ်စွာ မျက်မှောင် ကျုံ့လိုက်မိသည်။ ချင်းယန်စံအိမ်မှာ သူတော်စင်လက်နက်တွေမြင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဒါကြောင့် ဤသည်က ကဒီယန်၏သူတော်စင်လက်နက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောနိုင်သည်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီကမ္ဘာကိုရောက်ပြီးကတည်းကနေ အခုမှသူတော်စင်လက်နက် အသုံးပြုသည်ကို မြင်ဖူးတာဖြစ်တယ်။ သူစိတ်မလှုပ်ရှုားဘဲ ဘယ်နေမလဲ။
ရွှေရောင်ဓားကြီးပေါ်လာသည်ကို ကြည့်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေထဲဆူညံသွားလေတယ်။
“ဒါဆို သူသူတော်စင်ဖြစ် သွားပြီပေါ့
“ကဒီယန်သာ သူတော်စင်အဆင့်ဆို ချင်းယန်ဟူတော့ သေပြီပဲ”
သူတော်စင်အထွတ်အထိပ်အဆင့်နှင့် သူတော်စင်ကသိပ်မကွာပေမယ့် ဖြတ်ကျော်ဖို့ရာတော့ခက်သည်။ ခါဂဲအကယ်ဒမီမှာ သူတော်စင်အဆင့်စီနီယာတွေအများကြီးရှိသည်။ သို့ပေမယ့် လူတိုင်းလက်နက်မသွန်းလုပ်နိုင်ပေ။ ထိုသို့သွန်းလုပ်နိုင်ဖို့ရာလည်း အတော့်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ ထန်ယွမ်တိုက်ကြီးအတွင်းမှာတောင် လက်နက်သွန်းလုပ်သည့်အဆင့်မရောက်ပဲ သေသွားရသူတွေအများကြီးပင်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူတော်စင်အဆင့်ေ၇ာက်သွားပြီဆိုလျှင် ထိုသူ၏ခွန်အားမှာအတော်လေး များပြားသွားပေလိမ့်မည်။ သူတော်စင်လက်နက်ဆိုသည်မှာ လက်နက်ကြီးသက်သက်မဟုတ်ပေ။ သုံးစွဲသူ၏စွမ်းရည်တွေကို တစ်ဖက်သား၏ခွန်အားတွေထက်သာလွန်အောင် ထောက်ပံ့ပေးသေးသည်။
ကဒီယန်ရဲ့လက်နက်ကိုကြည့်ရင်း ချင်းယန်ဟူ၏ မျက်နှာမှာ သက်တောင့်သက်သာမရှိတော့ပေ။ ကဒီယန်ကသူတော်စင်အဆင့်ေ၇ာက်သွားပြီဆိုရင် ကောင်းကင်ကိုတောင် လှုံ့ဆော်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ သူတော်စင်အထွတ်အထိပ်အဆင့်ကလူတစ်ယောက်က သူ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်တော့ပေ။
“အကိုကြီးက သူတော်စင်လက်နက် သွန်းလုပ်နိုင်သွားပြီလား…”
စင်အောက်က ကဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်း အံ့အားသင့်နေလေတယ်။ ကဒီကွင်အံ့အားသင့်စွာဖြင့် ကဒီယန် သူ့လက်နက်ကိုဝေ့ယမ်းနေသည်အား တအံ့တသြကြည့်နေမိသည်။
သူတော်စင်လက်နက်အားကြည့်ရင်း ကဒီလျှံမျက်နှာမှာ အားကျသည့်အရိပ်အယောင်တွေရှိနေသည်။ သူ့အကိုက သူမရောက်နိုင်သေးတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားခဲ့ပြီပဲ။
ချင်းယန်ဟူ၏မျက်နှာကတော့ တဖြည်းဖြည်းမဲမှောင်လို့နေလေပြီ။ ဖိအားတွေက ချင်းယန်ဟူကိုအတော်ဒုက္ခပေးနေပြီ။
“ဟား…ဟား..ဟားးးး…. ချင်းယန်ဟူ .. မင်းအခုကြောက်နေပြီလား။ မြေပြင်မှာ ဒူးသုံးကြိမ်ထောက်ပြီး ခခယယတောင်းပန်မယ်ဆိုရင် ငါခွင့်လွတ်ပေးမယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဟွန့် ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့”
ချင်းယန်ဟူရဲ့မျက်နှာဟာ ပိုပြီးအ၇ုပ်ဆိုးသွားတယ်။ သူချက်ချင်းဒေါသသဖြင့်ပြန်ပြောသည်။
“အိပ်မက်သာမက်နေလိုက်။ ကဒီယန် မင်းဘာသာသူတော်စင်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ငါချင်းယန်ဟူက သေတောင်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး”
ကဒီယန် ချင်းယန်ဟူအား အမြင်ကတ်စွာကြည့်သည်။
“ချင်းယန်ဟူ မင်းငါ့နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ ဘာလက်နက်ကိုသုံးမှာလဲ”
ချင်းယန်ဟူ ကဒီယန်အားအံကြိတ်ကာကြည့်လိုက်သည်။ သူ့မျက်လုံးထဲမှ မီးဝင်းဝင်းတောက်လျက်ရှိသည်။
ထိုအခချိန်တွင် လူအုပ်ထဲမှ ဓားတစ်ချောင်းအား ချင်းယန်ဟူဆီပစ်ပေးလိုက်သည်။
ချင်းယန်ဟူ ထိုဓားအားဆွဲဖမ်းလိုက်သည်။ ဒီဓားဟာမပေါ့သလို အရမ်းလည်းမရှည်လှဘူး။ ငွေဓားဟာ အလင်းရောင်အောက်မှာ အရပ်လေးမျက်နှာလုံးကို တဖျက်ဖျက်လက်နေစေတယ်။ အရောင်ကိုဖယ်လိုက်ရင်တောင် ကဒီယန့်ဓားနှင့် ချင်းယန်ဟူဓားဟာ အနည်းငယ်ကွာခြားနေသေးတယ်။